Mashiinka Calaamadeynta Shiinaha (Dhalada Wareega), Soo-saarista TAPM-A iyo Warshad | Iswaafajiyay
Mashiinka Calaamadeynta (Dhalada Wareega ah), Taxanaha TAPM-A
Mashiinka calaamadeynta dhalada ayaa sida caadiga ah loogu talagalay in lagu dhajiyo sumadaha dhejiska dhalooyinka wareegyada kala duwan.
Wheel Nidaamka istiraatiijiga ah ee iskudhafan ee iswaafajinta waxaa loo qaatay sharciyeynta xawaaraha talaabada ah, kala dheereynta dhalooyinka si fudud ayaa loo dejin karaa iyadoo loo eegayo baahiyaha gaarka ah;
Inta udhaxeysa calaamadaha waa la hagaajin karaa, oo ku habboon sumadaha leh cabbirro kala duwan;
Machine Mashiinka koodhku waa la qaabeyn karaa sida aad ku codsatay;
Baaxadda sumadda 20-130mm
Dhererka sumadda 20-200mm
Xawaareynta calaamadeynta 0-100 dhalo / saacaddii
Dhexroorka dhalada 20-45mm ama 30-70mm
Xaqiijinta calaamadeynta Mm 1mm
Jihada hawlgalka Bidix → Midig (ama Midig → Bidix)
Adeegsiga Aasaasiga ah
1. Waxay ku habboon tahay calaamadeynta dhalada wareega ee dawooyinka, cuntada, kiimikada maalinlaha ah iyo warshadaha kale, waxaana loo isticmaali karaa calaamadeynta wareegga buuxa iyo calaamadeynta nus wareega.
2. Dhalada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah, oo si toos ah ugu xirmi kara khadka soo-saarka hore, iyo si toos ah ugu quud dhalooyinka mashiinka calaamadeynta si loo kordhiyo waxtarka.
3. Qalabaynta qaabeynta ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaariga ah iyo mashiinka calaamadeynta, kaas oo daabacan kara taariikhda wax soo saarka iyo tirada dufanka khadka tooska ah, yareynaya hannaanka baakadaha dhalada iyo hagaajinta waxtarka wax soo saarka.
1. Sumadaha la adeegsan karo: sumadaha is-dhejiska, filimada is-kooba, koodhadhka kormeerka elektarooniga ah, barcode, iwm.
2. Badeecadaha la adeegsan karo: alaabooyinka u baahan sumadaha ama filimada in lagu dhejiyo dusha wareega
3. Warshadaha dalabka: waxaa aad loogu isticmaalaa cuntada, daawada, waxyaabaha la isku qurxiyo, kiimikooyinka maalinlaha ah, elektarooniga, qalabka dhismaha, caagagga iyo warshadaha kale
4. Tusaalooyinka dalabka: Calaamadeynta dhalada wareega ee 'PET', calaamadeynta dhalada caaga ah, gasacadaha cuntada, iwm.
Ka dib markii farsamada kala-soocida dhalada kala soocayso alaabada, dareeraha wuxuu ogaadaa gudbinta alaabta wuxuuna dib ugu celiyaa calaamadda nidaamka xakamaynta calaamadeynta. Meesha ku habboon, nidaamka xakamaynta ayaa koontaroolaya mootada si ay ugu dirto calaamadda una lifaaqdo badeecada lagu calaamadeynayo. Suunka calaamadeynta ayaa kaxeynaya badeecada inuu wareego, calaamadda ayaa la duudduubay, iyo ficilka lifaaqa ee calaamadda waa la dhammaystiray.
1. Dhig badeecada (ku xir khadka safka)
2. Bixinta alaabta (si toos ah ayaa loo ogaaday)
3. Sixitaanka badeecada (si otomaatig ah ayaa loo ogaaday)
4. Baadhitaanka alaabta (si toos ah ayaa loo ogaaday)
5. Calaamadeynta (si otomaatig ah loo ogaaday)
6. Diidmada (si otomaatig ah ayaa loo ogaaday)
7. Ururi badeecadaha calaamadeysan (ku xir nidaamka baakadaha ee xiga)
Hore: Mashiinka kartoonka ee alaabada dawooyinka
Xiga: Taxanaha DPL-ga Dheecaanka Dheecaanka Wax-qabadka Badan